Barbaarinta Ilmaha, Halkee Laga Bilabaa? | KEYDMEDIA ENGLISH
Sidoo kale sax ma aha inaan kabilowno; sidaan ilmaheena uga dhigi lahayn kuwa guul sare kakeena waxbarashada/ qaata shahaadooyin sare. Kahor intaan su´aashaa laga jawaabina waxaan weydiin lahaa dhawr su´aalood oo laga yaabo inay jawaabta inoo dhaweyn lahayeen.
Dr. Axmad Cabdulahi - Axmed.abdulahi@Keydmedia.net